အိပ်မက်တစ်ခုနဲ့ ကျွန်တော်: စက်မှုတက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်
ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျောင်းမှာ အဆိုးရွားဆုံး သောင်းကျန်းခဲ့တာ ဒီဒုတိယနှစ်ပါပဲ။ သူငယ်ချင်းကောင်းကတော့ ကိုစာကလေး ခေါ် ကိုကျော်ဝင်းအောင်။
ကျွန်တော် ကျောင်းတွေ မတက် ပေတေလေနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့အနားမှာ ရှိခဲ့တာ ကိုစာကလေး။
သူငယ်ချင်းတွေ တော်တော်များများမှာ အခင်မင်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ
စာကလေး၊ အောင်စည်သူ၊ ကပ္ပိယ၊ ဖိုးကေး ဒီလေးကောင်နဲ့တော့ တော်တော်လေး တွဲမိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဆိုးတဲ့အထဲမှာ ဒီကောင်လေးကောင် မပါဘူး။ ဆိုးဖော်ဆိုးဖက်တွေက တခြားသူငယ်ချင်းတွေ။
ဒီလေးကောင်က ကျွန်တော့ကို ထိန်းကျောင်းပေးနေတဲ့ကောင်တွေပေါ့။ အဲဒီအထဲမှာမှ ကျွန်တော်အချစ်ဆုံးက စာကလေး။ ဒီကောင်ကတော့ ကျွန်တော့ညီအရင်းလိုပဲ။
ဒီကောင် ရည်းစားရတော့ အင်းစိန်က ကောင်မလေးနဲ့။
ကျွန်တော် စာမေးပွဲ ဖြေခါနီး စိတ်တွေ တအားလေနေတဲ့အချိန်....
ဒီကောင်က သူ့ကောင်မလေးအိမ်မှာ တံခါးမရှိ ဓါးမရှိ ၀င်နေတဲ့အချိန်ပေါ့။
ကျွန်တော့ကို သူ့ကောင်မလေးအိမ်ကို ခေါ်သွားပြီးတော့ လဘက်တွေကျွေးပြီး စာတွေကျက်ခိုင်းတာ မှတ်မိသေးတယ်။ သူ့ကောင်မလေး နာမည်က မိုးသက်စံ... အခုတော့ သူတို့နှစ်ယောက်လည်း အိမ်ထောင်ကျပြီးတော့ ကလေးတောင် ၂ ယောက်ဖြစ်နေပြီ။ ဟုတ်တယ်နော် ကိုစာကလေး ၂ ယောက် ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ တစ်ခြားတော့ သိပါဘူး။ ( ငါ ဘာမှ ပြောဘူးနော် ... မင်းကောင်းကြောင်းတွေပဲ ပြောထားတာ... ငါ့မိန်းမ မကေခိုင်ကို ဘာမှာ မပြောကြေး ... ဟဲဟဲ )
ကျွန်တော်တို့က ယောက်ဖ လို့ခေါ်တဲ့ နှမလည်း မရှိတဲ့ အောင်စည်သူကြီးရယ် ဖိုးကေးရယ် ကပ္ပိယရယ် ကတော့ ခုထက်ထိ လူပျိုကြီးတွေ လုပ်နေတုန်း။ ကျန်တဲ့သူတွေတော့ မသိဘူးဗျ။ ဖိုးကေးကိုတော့ ယုံတယ်။ ဒီကောင်ကြီး ရည်းစားသနာ ထားတာလည်း မတွေ့ဘူး။ ငှက်ပျောတုံး ဖက်ရဖို့ အသေချာဆုံးကတော့ သူပဲ။ ကျန်တဲ့ နှစ်ကောင်ကတော့ အချိန်မတန်သေးလို့ပဲ ထင်ပါတယ်။ ခုချိန်ထိတော့ လူပျိုကြီးပါခင်ဗျာကို ကြွေးကြော်ကောင်းတုန်း။ ဒါမှမဟုတ် မာမီကြွယ်ကိုပဲ အားကျနေကြလားတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိဘူး။ ကြုံရင် ကျွန်တော်မေးကြည့်ရဦးမယ်။ အဟီး ကိုဖိုးကေး ချစ်လို့စတာနော်။ ပြန်ပြီးတော့ မ သမ ကြေး။
ကျွန်တော် ဒုတိယ နှစ် ကျောင်းမတက်ရသေးဘူး။ ပါချုပ်နဲ့ အရင်ဆုံး မိတ်ဆက်ရတာ ကျွန်တော်နဲ့ ဖဲရိုက်ဘက်တွေ။ အဆောင်လက်ခံတဲ့နေ့ပဲ အဲဒီည ချိန်းပြီး ဖဲရိုက်ကြတာ ပုပ္ပါးဆောင်မှာ။ အဆောင်မှူးက ကျွန်တော်တို့ ချစ်စနိုးခေါ်တဲ့ ဂေါဗါချော့။ သူက မနက်လေးနာရီလောက် လမ်းလျှောက်သံပေးပြီး ရပ်ခိုင်းနေတာ။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း တစ်ချပ်မှောက်ဆိုတော့ အရှိန်တွေ တက်နေတာ။ ဆရာက သည်း မခံနိုင်တဲ့အဆုံး တံခါးခေါက်ပြီး ဖမ်းပါလေရော။ အခန်းက စတုတ္ထ နှစ်သမားတွေအတွက်ပေးတဲ့ တစ်ယောက်ခန်း။ ပြေးစရာ အပေါက်မရှိဘူး။ အခန်းထဲမှာ ဖဲရိုက်နေတဲ့ကောင်က ၅ ယောက်၊ ဘေးထိုင်ဘိုင်ကျ ဘုပြောနေတဲ့အကောင်က ၄ ကောင်၊ ကုလားသေ ကုလားမော လာအိပ်နေတဲ့အကောင်က ၆ ယောက်။ ဟုတ်ကဲ့ တစ်ယောက်ခန်းမှာ အားလုံးမိတာ ၁၅ ယောက်။ :D အဲဒီအထဲကမှ ဖဲရိုက်တဲ့ ၅ ယောက်ကို ပါချုပ်ဆီကို ပို့တာ။ ပါချုပ်က ဦးကြင်စိုး။ တစ်ခါမှ မဆဲဘူးတဲ့ ဆရာကြီးက အဲဒီနေ့မှာ မှတ်မှတ်ရရ ငါနဲ့ ကိုင်တုပ်တာ ခံလိုက်ရတာက ကျွန်တော်တို့တွေ။ အမယ် ပါချုပ်နဲ့ တွေ့ရမယ် ဆိုတော့ အားလုံးက လည်ကတုံးလေးတွေ ကိုယ်စီနဲ့။ အတော် ခန့်ညားနေတာ။ ဆရာကြီးလည်းတော်တော် စိတ်လေသွားပုံရတယ်။ သူ့ရာဇ၀င်မှာ ကျောင်းမဖွင့်သေးဘူး အရင်ဆုံး သြ၀ါဒ ပေးရတာ အဲဒီအခေါက်က ပထမဆုံး ဖြစ်မယ် ထင်ပါရဲ့။
အဲဒီလို ကျွန်တော်တို့က အဖွင့်ကောင်းတာ ဒုတိယနှစ်ကို။
Posted by ကိုသက်ဝင်း at 7:13 PM
ငဝန်နဒီ March 12, 2012 at 10:37 PM
ပါချုပ်ရုံးခန်း ကထွက်လာတဲ့ မင်းမျက်နှာ ကို မြင်ယောင်မိသေးတယ်...
ပုံများအား Google မှ ရယူထားပါသည်။
အိပ်မက် အကြောင်းလေး ပြောရအောင်
All I need to survive!
သူငယ်ချင်း အချစ်ထက် ပိုချစ်ပါ
Comparison of Whitney Houston and Htoo Aein Thin
၁၀ တန်း ဒုတိယ နှစ်
ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော် (1)
စိတ္တဇ ကဗျာ (13)
တမ်းချင်း ကဗျာ (5)
ရှုပ်လိုက်တဲ့ အလုပ် (2)
နောင်တ ကဗျာ (1)
Copyright by Thet Win ( Immortal ). Picture Window theme. Theme images by molotovcoketail. Powered by Blogger.